SARIPIKA: Drone Maka Sary Ny Hakanton’i Thailand · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2014 9:43 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, فارسی, Dansk, Español, Ελληνικά, English
Buddha Goavana ao amin'ny Wat Muang any Ang Thon
Loharanom-baovao itokian'ny mpanao gazety sy mpizaha tany momba ny toe-draharaha any Thailand i Richard Barrow, bilaogera sady efa nonina maharitra tao an-toerana. Ankoatra izany, tsy nitsahatra ny mampiely ny haren-kolontsaina nentin-drazana sy ny hakanton'i Thailand izy. Manasongadina ny sary avy eny an-habakabaka izay nopihan'i Richard tamin'ny fampiasana Quadcopter Drone ny bilaoginy vaovao, Thailand from Above.
Richard mizara ny zavatra hitany tamin'ny fampisidinana drone iray raha nampiasa finday avo lenta (smartphone):
Tsy mbola manana traikefa amin'ny fampisidinana drones hafa aho ka tsy afa-manao fampitahana ho anao. Saingy hilaza zavatra vitsy hitako fa mahafinaritra aminareo aho. Voalohany, mora dia mora ny mampisidina “drone” sy manala ny tananao hiala amin'ny fanamoriana azy mba hifantohanao amin'ny finday avo lenta. Ara-teoria moa dia mihevaheva amin'ny toerana fotsiny io. Fa tsio-drivotra mahery indray mandeha dia mety hampipatitaka azy ka topazo maso ihany aloha ny amin'izay. Ny tena mahafinaritra dia hita mivantana amin'ny finday ny sary avy amin'ny fakantsary ao amin'ny drone.
Pagoda manamorona ny renirano. Phra Samut Chedi any Samut Praka
Wat Ban Rai any Dan Kun Tod, Nakhon Ratchasima
Tempolin'ny Diantongotr'i Buddha. Wat Phra Phutthabat ao Saraburi
Tohodrano Pa Sak Jolasid Dam ao Lopuri no tahirin-drano lehibe indrindra ao afovoan'i Thailand.
Mizara ireo sary amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy amin'ny alalan'ny diezy Twitter #thaidrone i Richard
“Ny Ranomasin-Javona” ao amin'ny Phu Huan Isan ao Nong Khai. Miondrika mijery ny Reniranon'i Mekhong avy eny amin'ny 200 metatra
Drone Thai maka sary manavatsava an'i Pratunam avy eny amin'ny Tsangambaton'ny Fandresena ao Bangkok
Nampiasain'ny mpanao gazety maro ihany koa ny Drones hanaraha-maso ny fihetsiketseham-panoherana mandeha ao Bangkok, renivohitry ny firenena amin'izao fotoana izao.
Drone Thai maka sary avy eny an-habakabaka manopy maso eo amin'ny Tsangambaton'ny Fandresena ao Bangkok
*Ny sary dia avy amin'i Richard Barrow, nahazoana alalana
11 ora izayMalezia